Weather & Radar အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
2021.21.2 for Android
4.5 | 50,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် XAPK（19.2MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Weather & Radar
• ၁၄ ရက်ကြာရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်
🌞 မိုးလေ ၀ သအက်ပလီကေးရှင်း
မိုးလေဝသနှင့်ရေဒါအခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်အချိန်တိုင်းအဆင့်မြှင့်ပါ။ အမြဲတမ်းနေ၊ ထွက်၊ မမိုး၊ မိုး၊ နှင်းများကျလိမ့်မည်ဆိုပါကမိုးသက်မုန်တိုင်းနီးပြီ။ ရာသီဥတုအသုံးချပရိုဂရမ်သည်သင်၏တည်နေရာအတိအကျအတွက်လက်ရှိရာသီဥတုအခြေအနေကိုတိကျစွာဖော်ပြပေးလိမ့်မည်။
တစ်ချက်ကြည့်ပါရာသီဥတုအခြေအနေ! အပူချိန်၊ မိုးရေ၊ မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်နိုင်ခြေ၊ နှင်း၊ လေ၊ နေရောင်ခြည်၊ နေထွက်ချိန်နှင့်နေ ၀ င်ချိန်တို့နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ လေဖိအား၊ စိုထိုင်းဆအဆင့်များနှင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ။ ၁၄ ရက်ကြာမိုးလေဝသအခြေအနေနှင့်အတူနောက်ထပ်ကြိုတင်စီစဉ်ပါ။
သင်၏စံသတ်မှတ်ထားသောမိုးရေချိန်မြေပုံထက်မကပါ။ မိုးရေ၊ ဆီးနှင်း၊ မိုးသီး၊ မိုးကြိုးမုန်တိုင်းနှင့်မိုးကြိုးပစ်ခြင်းများပါဝင်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်တိုးမြှင့်သောရေဒါမြေပုံကိုကြည့်ပါ။ ဒီအင်္ဂါရပ်ကသင့်အားနေရာအမျိုးမျိုးအတွက်မိုးလေ ၀ သအခြေအနေများကိုတစ်ပြိုင်နက်ကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင့်ရဲ့တည်နေရာကိုသူတို့ထိသွားမလားဆိုတာသိရန်တိမ်တိုက်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ရာသီဥတုမျက်နှာစာများနှင့်တက်ကြွသောမုန်တိုင်းများ၏လှုပ်ရှားမှုကိုခြေရာခံပါ။
ဝစ်ဂျက်သည်သင်၏လက်ရှိတည်နေရာအတွက်ရာသီဥတုအချက်အလက်ကိုသင့်စက်၏မူလမြင်ကွင်းတွင်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာဖော်ပြသည်။ မတူညီသောဝစ်ဂျက်အမျိုးအစား ၄ ခုမှရွေးချယ်ပြီးသင့်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအတိုင်းချိန်ညှိပါ။ ဒေသအပူချိန်နှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုအသာပုတ်။ ကြည့်ပါ။
ရေအားကစားကိုနှစ်သက်သော? သင်ရေကူးခြင်း၊ လှိုင်းစီးခြင်း၊ ရွက်လွှင့်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်ငါးဖမ်းခြင်းကိုသွားချင်သည်ဖြစ်စေ၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများရှိရေအပူချိန်များကိုကြည့်ရှုရန် Weather & Radar ၏အခမဲ့အက်ပ်ကိုအားကိုးနိုင်သည်။
🌀 မိုးကြိုးမုန်တိုင်း Tracker
ကာတွန်းမိုးလေဝသမြေပုံတွင်လျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ခတ်မှုတစ်ခုချင်းစီကိုကြည့်ပါ။ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှု၊ မိုးသီးနှင့်မုန်တိုင်းကဲ့သို့သောနေရာများကိုညွှန်ပြသည့်မိုးတိမ်ဖုံးအုပ်မှုအရမိုးတိမ်အရောင်များကိုပြသထားပါသည်။ ဒီအပလီကေးရှင်းသည်လေစွမ်းအင်နှင့် ဦး တည်ချက်ကိုလည်းညွှန်ပြပါလိမ့်မည်။
သင်လမ်းလျှောက်ချိန်မှသည်ဤရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းမှသည်အထိမိုးလေဝသနှင့်ရေဒါရဲ့အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းကိုမှီခိုနိုင်သည်။ ပြင်ပစီမံကိန်းများ၊ လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အဖြစ်အပျက်များကိုစီစဉ်ခြင်း။ ခရီးတစ်ခုကိုစီစဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံတွင်မိသားစု ၀ င်တစ် ဦး ဦး ထားခြင်းရှိပါသလား။ မည်သည့်တည်နေရာကိုမဆိုသိမ်းဆည်းပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာအတွက်မဆိုလက်ရှိအခြေအနေများကိုတစ်ပြိုင်တည်းကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာကမ္ဘာ့ရာသီဥတု!
ရာသီဥတုအက်ပလီကေးရှင်းကို ၀ ယ်ယူခြင်းဖြင့်ကြော်ငြာခြင်းနှင့်သင်၏ပင်မစာမျက်နှာကိုကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ရွေးစရာများမှအမြတ်ယူပါ။
သင်၌မေးမြန်းချက်များသို့မဟုတ်ထင်မြင်ချက်များရှိပါက [email protected] သို့ဆက်သွယ်ပါ
Live Radar: Severe threat along cold front this morning
Weather & Radar - The Best App For Your Weather Worldwide
Detailed Weather with Weather & Radar app
Weather & Radar Wind Map!
Weather & Radar - Storm alerts 2021.17
अग्रोस्टार किसान हेल्पलाइन - भारत में निर्मित
ဝက်ဆုိဒ် ေရာက် တ Google.ရဲ့ အ ေထာက်ပံ့ေဆာ့ဝဲ ပါ